Magangalyo doonka oo lagu xamaasho | Somaliska
Magangalyo doonka oo lagu xamaasho
Dadka magangalyo doonka ah iyo kuwa sharciga loo diiday ayaa la sheegay in si bani’aadanimada ka baxsan loogu xamaasho goobaha baabuurta lagu dhaqo. Baaritaan ay sameysay idaacada Sverige ayaa lagu soo bandhigay in dadka aan sharciga lahayn loogu shaqeysto si bani’aadanimada ka baxsan oo la siiyo dhaqaale aad u hooseeya.
Warbixinta ayaa lagu soo bandhigay in goobo badan oo baabuurta lagu dhaqo ay ka shaqeeyaan dad sharci la’aan ah oo saacadii la siiyo 20kr oo keliya. Dadkaas ayaa la sheegay in ay sidoo kale shirkadahu dajiyaan guryo aad cariiri u ah oo heerka noloshu aad u hooseeyo.
Booliiska ayaa sanadkii hore wax baaritaan ah aan sameyn iyagoo sanadkaan 23 goobood oo baabuurta lagu dhaqo baaritaan ku sameeyay. Magaalada Stockholm ayaa kala bar goobihii baaritaanka lagu sameeyay waxaa lagu soo qabtay dad sharci daro ah oo shaqeynaya. Booliiska ayaa sheegay in ay arkeen dad 10-12 saac shaqeyanaya oo aan la siineyn 30kr ka badan saacadii.
Tirada magangalyo doonka oo la filayo in ay siyaado iyo Soomaalida oo sabab u ah
Qorshihii dowlada Sweden ay ku bixinaysay sharciga ku meel gaarka ah oo dib u dhacay
Ma tahay oo ma noqon kartaa Swedish?
October 24, 2011 at 07:40
waa wax laga xumaado lalana yaabo in qof bini aadam ah loo quudho wax aadan jeclaateen in lagugu sameeyo . waan la wada soconnaa maanta waxay labatan kron ay qabato . waxaan dhihi lahaa qofka maanta noloshaas ku jira waxaa u dhaami lahayd dalkiisii dhib kastaa ha ka jiree iskaga noolow ku laabo 20kr waa hal liter oo caano ah waliba kuwa aan nafaqada lahayn ayay goysaa
daahir omar says:
October 24, 2011 at 09:00
walaahi waa arin cajiba hadii lagu shaqaysanayo masakinta sharica antaa
October 24, 2011 at 14:53
Asc matasad layabantihin anaga waxban sharci heysanaleh waxba madhano kuwa sharci la.aanta ah qarken oo sharci hestan waxa laga yabaa waxan 20kr dhaamin in eey ku shaqeeyan marka waxan filayaa qof kasto oo ajanabi ah in eey heysato dhibatada
October 25, 2011 at 13:28
waa wax murugo leh in qof bila adan ah laga qaado karamadisa oo lugu shaqesto